Inona ny tambajotra fanaterana atiny (CDN)?
Na dia mitohy mihena aza ny vidin'ny fampiantranoana sy ny fantsom-pifandraisana, dia mety mbola lafo ihany ny fampiantranoana tranonkala amin'ny sehatra fampiantranoana premium. Ary raha tsy mandoa be ianao, dia azo inoana fa miadana ny tranokalanao - very ny isan'ny orinasanao manan-danja. Rehefa mieritreritra ireo mpizara anao hampiantrano ny tranokalanao ianao dia tsy maintsy miaritra fangatahana maro. Ny sasany amin'ireo fangatahana ireo dia mety mitaky ny mpizarao hifandray amin'ny hafa
Fahadisoana 9 mahafaty izay mahatonga ny toerana hiadana
Alakamisy Janoary 11, 2018 Sabotsy, Janoary 13, 2018 Douglas Karr
Ny tranokala miadana dia misy fiantraikany amin'ny tahan'ny famoahana, ny tahan'ny fiovam-po, ary na ny laharan'ny motera fikarohana anao aza. Izany dia nilaza fa gaga aho amin'ny isan'ny tranonkala mbola miadana be. Nasehon'i Adam ahy tranokala androany nampiantranoina tao amin'ny GoDaddy izay naharitra mihoatra ny 10 segondra ny entana. Mihevitra ity olona mahantra ity fa manangona vola mivady amin'ny fampiantranoana… fa very vola aman-taonina maro satria mandoa vola ny mpanjifa ho avy. Nihalehibe ny mpamaky anay
Ohatra 13 ny amin'ny vokatry ny hafainganam-pandehan'ny vokatra eo amin'ny hafainganana
Alahady, Martsa 26, 2017 Alahady, Martsa 26, 2017 Douglas Karr
Nanoratra kely ihany izahay momba ireo fiatraikany izay misy fiatraikany amin'ny fahafahan'ny tranonkalanao mitondra entana haingana ary mizara ny fomba haingana kokoa mandratra ny orinasanao. Tena gaga aho amin'ny isan'ny mpanjifa mifampidinika aminay izay mandany fotoana sy hery be amin'ny paikady marketing sy fampiroboroboana votoaty - mandritra ny famindrana azy ireo amin'ny mpampiantrano tsy manara-penitra miaraka amina tranonkala iray izay tsy noheverina ho mavesatra haingana. Manohy manara-maso ny hafainganam-pandehan'ny tranonkalantsika manokana izahay ary
Mampihatra Amazon S3 ho an'ny bilaogy WordPress
Alatsinainy, 22 Jona, 2009 Alatsinainy 1 Febroary 2016 Douglas Karr
Fanamarihana: Hatramin'ny nanoratanao an'io dia nifindra monina tany Flywheel izahay niaraka tamin'ny tambajotra fanaterana votoaty ampiasain'i StackPath CDN, CDN haingana be kokoa noho i Amazon. Raha tsy hoe premium ianao, sehatra fampiantranoana orinasa, sarotra ny mahazo fampisehoana amin'ny orinasa CMS toa ny WordPress. Ny fizarana enta-mavesatra, ny famerenana amin'ny laoniny, ny fahaverezana, ny fanaovana kopia ary ny fandefasana atiny dia tsy mora. Solontenan'ny IT maro no mijery sehatra toa ny WordPress ary mampiasa azy ireo satria afaka izy ireo. Na izany aza tsy miankina ny fahalalahana. Ataovy eo amin'ny WordPress